ब्वाईफ्रेन्डले भन्दा अर्काको पोइले मज्जा आउने गरि गर्दोरहेछ ! – Sidha Post 24
मोतीनगर टिकापुर कैलालीकी आचार्यले बिगत ७ बर्षदेखि गायन र मोडलिङ एकसाथ अगाडी बढाउँदै आएकी छन् । दोहोरीबाट कलाक्षेत्रमा हामफालेकी आचार्यले तीन चर्चित लोकदोहोरी एल्बम समेत श्रोतालाई दिएकी छन् । ‘नजिक नजिक सछर्न्’, ‘तीन साल अमेरीका’, ‘यो मोरीको घैंटोमा कहिले घाम लाग्ने हो’ उनका दोही गीतका भाका हुन् ।
मेकअपमा कतिको रुचि छ ? राम्री हुन कस्लाई मन पर्दैन होला र ? मेरो पनि मेकअपतिर धेरै रुचि छ । म मेकअप पनि ड्रेसअप अनुसारको गर्न रुचाउँछु । म बाहिर कार्यक्रमको लागि निस्कनु पर्दा आधा घन्टा जति मेकअपमानै लाग्ने गरेको छ ।
भनेपछि फेसन प्रति लगाव त पक्कै होला ? अहिलेको जेनेरेसनले फेसनमा चासो पनि दिनुपर्छ । मलाई आफूलाई हट एबं सेक्सी देखिने खालको छोटो पहिरन मनपर्छ । यस्ता पहिरन नै बढि प्रयोग गर्ने गरेकी छु ।
कस्तो खालकी केटी तपाई ? – मेरो स्वभाव चन्चले छ । यस्तो स्वभावले गर्दा धेरैले बच्चा जस्तै छस् त समेत भन्ने गरेका छन् । कस्तो केटा मन पर्दैन ? – झुटो बोल्ने, अरुलाई डोमिनेट गर्ने, ठूलो पल्टिने खालको केटा पटक्कै मन पर्दैन ।
प्रेम त पक्कै परेको होला ? – छैन नि । जीवनसाथीको रुपमा गरिने प्रेम कसैसँग गरेकी छैन । मन मिल्ने भेटेकी पनि छैन । अहिले करियर निर्माणको दौडमा छु । त्यसैले प्रेममा अल्झिन पनि चाँहन्न । म कलाकार हुँ । कलाकारले दर्शकसँग गर्ने माया धेरैसँग गाँसेकी छु ।